विदेशबाट आएको पैसा खाने अनि राजालाई गाली गर्ने हक कसैको छैन: राजाले देश बेचेको इतिहासमा छैन
डा. प्रेम सिंह बस्न्यात नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल हुनुहुन्छ । सैन्य इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नुभएका बस्न्यातले धेरैवटा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । १४ पुस्तक लेखिसक्नु भएका बस्न्यातका दुई पुस्तक प्रकाशोन्मुख छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताबारे कडा र स्पष्ट बस्न्यातले यसपटकको अन्तर्वार्तामा निम्नानसारका धारणा राख्नु भएको छ– म पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिबाट उत्साहित छैन ।
मैले बुझेको जनता पनि उत्साहित छैनन् । जनता पनि दुई खालका छन् । एक स्वतन्त्र म जस्ता जनता र अर्को पार्टीका कार्यकर्ता । अहिलेको राजनीतिबाट खुसी भएको भनेको पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । अहिले यस्तो माहोल सिर्जना भयो कि ६२/ ६३ को आन्दोलन पछि कसैले पनि शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर पाइलट, खरदार मुखिया, सुब्बा जे हुन पनि पार्टीको झोला बोक्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अझ राजदूत र भिसी हुनका लागि त यस्तो धेरै आवश्यक पर्न थाल्यो । दलको पछि लागेकाहरुले घिस्रेर होस, चाहेर होस नचाहेर होस दलहरुले जे जे गर्छन उनीहरु ताली बजाउन विवस हुन्छन् । उनीहरुको रोजीरोटी त्यसमा जोडिएको छ । यसमा बुद्धिजीवीहरु पनि छन् । उनीहरुको लागि पनि अहिलेको मौसम अनूकुल बनेको छ । एउटा ट्याम्पोलाई ट्रक तान्न लगायो भने तानिन्छ ? तानिदैन ।
हो त्यस्तै हो । अहिलेको संविधान भनेको ट्याम्पो हो । यसले मुलुक धान्न तान्न सक्दैन । मुलुक धान्न र तान्न नसक्ने संविधान जारी भएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीहरुले बजेट जारी गर्छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत त विदेशीको भर, राजश्व उठाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हुन्छ । भोलिको दिनमा यति धेरै सांसद, मन्त्री, कर्मचारी थप्नु पर्ने छ । देशले धान्न नसक्ने गरी संरचना बनाइएको छ ।
मन्त्री र कर्मचारी थपेर विकास हुन्छ ? मन्त्री र कर्मचारी कम भएर यो मुलुक विकास नभएको हो भन्ने सोचले संविधान बनाइएको छ । यसकारण संविधान त्रुटिपूर्ण छ । नेपाललाई चाहिएको राजनीति नेताहरुले गरेको भए ५०–६० जना सांसदले हाम्रो संसद चल्न सक्छ । पश्चिमाहरुले कुनै बदलाको लागि नेपालमा थोपरेको व्यवस्था हो यो । अहिलेको व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था होइन ।
नेपाली जनताले झन्डै हजारको हाराहारीमा सांसद पाल्छौ भनेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेदेखि नै नेपाल उनीहरुको सत्रु राष्ट्र बन्दै आएको छ । यसकारण उनीहरु जहिले पनि हामीलाई बिथोल्न चाहन्छन् । अहिलेको परिवेश भन्ने हो भने त्यो सम्भव पनि भयो । संघीयता थोपरिएको हो । संघीयता नभएर देश अविकसित भएको होइन ।
७५ जिल्लाको विकास गर्ने पैशा त यिनै नेताहरुले थुपारेर राखेका छन् । यिनको कठालो समातेर सोधौं त पैशा कहाँबाट आयो भनेर । सबै थाहा हुन्छ । संघीयताका लागि मुलुक अगाडि बढिसक्यो । तर धान्न नसक्ने व्यवस्थातिर गयो । अहिले जुनसुकै बच्चा जन्मियोस, जन्मनासाथ उसको थाप्लोमा १४ हजार ऋण हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले द्वन्द्व समाधान होइन निम्त्याउने खतरा देखेको छु ।
चुनावमा देश गएको छ । झोलेहरुका लागि यो ठिक मौसम हो । चुनाव भनेको पैशा कमाउने बाटो पनि हो । एउटा सिंगो नेपाल चलाउन नसक्नेले सात प्रदेश कसरी चलाउँछन ? मुख्य कुरा यो हो । अर्को कुरा के छ भने तराई टुक्रा पार्छु भन्नेलाई यिनीहरुले केही गर्न सकेनन् । बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता भएको देश हो । सिके राउत पक्राउ पर्दा उनी मानवअधिकारवादीको पछि लागेर राउतलाई छाड्नु पर्छ ।
भन्दै जाने मानिस हुन् उनी । अहिले ज्ञानेन्द्रले केही बोल्दा उनी किन पाँच हात उफ्रिन्छन ? यो देशलाई जोगाउँ भन्दा यहाँका केही मानिसहरु उफ्रिन्छन् । देशको माया गर्ने मान्छे धेरैलाई बिझाउँछ । संघीयतामा के दिन के खाने भन्ने समस्या हुन्छ । कांग्रेस एमाले माओवादीका यिनै डनहरु त आउने हुन हामीमाथि शासन गर्न । बोतल जति फेरे पनि रक्सी उही हो । व्यवस्था जति फेरे पनि नेता उही हुन ।
अनि हुन्छ कसरी परिवर्तन ? मेरो प्रश्न यही हो । यी नेताहरुलाई परिवर्तन नगरी केही फाइदा छैन । संघीयता भनेको उपनिवेशबाट छुट्टै भएको अवस्थामा, स साना राजाहरु भएको ठाउँमा, भारत अमेरिका जस्तो ठाउँमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । हाम्रो भूगोल भारत, अमेरिका, चार भाषा बोलिने स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो होइन । हाम्रो मुलुक त असाध्यै सानो छ । १० वर्षमा यो सात प्रदेश ३५ वटा हुन्छ ।
एउटा देश त यिनीहरुले जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एक मधेस एक प्रदेश भनेर देश टुक्र्याउने योजना बनाएर पश्चिमा, इन्डिया लागि परेको थियो । अहिलेको व्यवस्थाले केन्द्र कमजोर हुनेछ । मुलुक टुक्रा टुक्राको संघ भएपछि विदेशीलाई खेल्न सजिलो हुन्छ । देश टुक्रा पार्नेहरुलाई सजिलो हुन्छ । त्यही सजिलोको लागि संघीयता ल्याइएको हो ।
विदेशीका दलाल, एनजिओको कारणले विशेषगरी पश्चिमाका कारण देश टुक्रा हुने दिन आउला भन्ने लाग्छ । यो संविधान नागबेली जस्तो भएको छ । पश्चिमाको रुचीले संविधान बनेको छ । कांग्रेस, एमालेलाई मन मनमा घाँडो भएको छ । यो संविधान यिनीहरुले लेखेका होइन । तर पश्चिमाको रुचीमा आएको संविधान यिनीहरु जसरी भए पनि लागू गर्न खोज्दै छन् ।
उता भारतलाई पनि नेपालको संविधान चित्त बुझेको छैन । नेपालमा हिन्दू धर्म मासिएला भन्ने अहिलको संस्थापनको चिन्ता देखिन्छ । नेपालमा क्रिष्चियन बढ्दा चीन पनि दुःखी हुन्छन् । तिब्बत नेपाल सीमामा क्रिष्चियन बढ्दा उनीहरुलाई दुःख दिन्छन् । नेपाल टुक्रा पार्न, धर्म मास्न खटिएका विदेशीका खेतालाहरुले मेरो नाक कति लामो, मगरको कति छोटो भनेर विषय उचाल्छन् ।
बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुले प्रपोगन्डा गर्छन् । पाँच सात जना दलाल विदेशी एजेन्ट (लोकराज बरालसहित)को त मैले पहिले नाम पनि लिएको छु । तराई छुट्याउनु पर्छ भन्ने झा थरको एक वकिल जो बेलायतमा पढेर आएका उनी पश्चिमाको पालित पोषित हुन् । उनलाई अहिले राजपा नेपालले समानुपातिकामा नाम राखेको छ । यिनीहरु मन्त्री हुन, मागी खान, विदेशीको नुन खान नेपालीको खुन खान यी प्राज्ञ विज्ञको लागि अहिले व्यापारको मौसम आएको छ ।
राजनीतिमा कुनै पनि दिवास्प्न हुँदैन । पूर्वराजाले जे बोले त्यो अनौठो छैन । त्यो कुरा मै आफै पनि बोल्छु । हामीले नै बोल्नु पथ्र्यो । देश बरबाद हुन लाग्यो भनेर हामी सात दिन सात रात प्रमाण दिएर बोल्न सक्छु । अब मुलुक दुर्घटनामा लगेर हाल्दै छन् । भोलिको दिनमा राजसंस्था फर्किने सम्भावना छ । ज्ञानेन्द्रका पूर्खाले यो देश जोगाइदिएका हुन् ।
यी दलहरुले भनून कुन राजाले आफ्ना छोरा नातिका लागि देश बेचेका छन ? कुन राजाले पैशाकालागि राजदूतको पद, न्यायाधीशको पद बेचेका छन् ? पूर्वराजाले ठिक समयमा बोलेका छन् । अब जो होस हामीलाई राजा चाहिएको छ । देशले राजा खोजेको छ । सडकमा जनता निस्किने बेला भइसकेको छ ।
Prevकाङ्ग्रेसको नेकपालाई गिराउने षड्यन्त्र : ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लागेर नेकपामाथिको तयारि
Nextरेणु दाहाललाई मुखमा आएको बोलेर पक्राउ परे यी युवा: सामजिक सञ्जालमा कसैको चरीत्र हानी नगरौँ